Plus size မမတို့လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ ဖက်ရှင်အလွဲ (၅) ခု - For her Myanmar
မမဝဝမို့ စမတ်ကျလို့ မရတော့ဘူး ဘယ်သူပြောလဲ
မိန်းကလေးတွေအတွက် ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင် ရွေးချယ်စရာတွေ အင်မတန်များတယ်ဆိုတာ ယောင်းတို့လည်း အသိပါပဲ။ တစ်နေ့၊ တစ်နေ့ အပြင်ထွက်တော့မယ်ဆို အဝတ်အစားအတွက် ခေါင်းစားရတာကလည်း အလုပ်တစ်လုပ်လေ… အထူးသဖြင့် ဖက်ရှင်ကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေပေါ့.. ဒီလို ဖက်ရှင်ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပေါ်မူတည်လို့ ဘယ်လိုလေးဆို ကိုယ်နဲ့လိုက်မလဲ စဉ်းစားကြရတာ ပုံမှန်ပါပဲ။ အဲဒီမှာတင် အလွဲတချို့ ပေါ်လာတော့တာပဲ ယောင်းတို့ရေ… ဒါဆို ပြည့်ပြည့်ဝဝ မိန်းကလေးတွေ ကိ်ုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အဝတ်အစားရွေးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို အမှားတွေ လုပ်မိတတ်လဲ ကြည့်ကြည့်ရအောင်…
ခပ်ပြည့်ပြည့်မိန်းကလေးတွေ အများဆုံးလုပ်တတ်တဲ့အမှားကတော့ ကိုယ်ဝတာကို အင်္ကျီပွပွတွေအောက်မှာ ဖုံးထားရင် သွယ်လျသလိုဖြစ်မယ်ထင်ကြတာပဲ။ အင်္ကျီပွပွတွေက ယောင်းကို ပိန်တဲ့အသွင် မဖြစ်စေတဲ့အပြင် ပိုဝတဲ့အသွင်ပြောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာ သတိချပ်ပါ။
Related article >>> လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ ရှိကိုရှိသင့်တဲ့ အင်္ကျီ (၅) မျိုး
(၂) အရောင်ရင့်တွေပဲ ရွေးဝတ်တာ
အရောင်ရင့်တွေက လူကိုပိန်သွယ်တဲ့အသွင်ပေးတာ မှန်ပေမဲ့ အမြဲအရောင်ရင့်တွေပဲ ဝတ်တော့မလို့လား ? အရောင်တောက်တောက်တွေ၊ အရောင်ဖျော့တွေကို အပေါ်တစ်ရောင်၊ အောက်တစ်ရောင် ဝတ်တာက ခါးနဲ့တင်ကို အချိုးကျကျ ခွဲထုတ်ပေးတဲ့အပြင် လူတွေရဲ့အမြင်ကိုလည်း လှည့်စားပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) ဆိုက်ဒ်အပေါ်မှာ အာရုံစိုက်လွန်းတာ
ကိုယ်က L size ဝတ်နေကျဆိုပါစို့။ ရှော့ပင်းထွက်လို့ L size ထက် M size က ကိုယ့်အတွက် ပိုကျော့ရှင်းတဲ့အသွင် ဖြစ်စေမယ်လို့ထင်ရင် M size ကိုပဲရွေးပါ။ ကောက်ညှင်းထုတ်ဖြစ်နေမလား၊ ဝိတ်ပြန်တက်လာရင် မတော်တော့ဘဲနေမလား ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဆိုဒ်ပေါ်မူတည်ပြီး မကန့်သတ်လိုက်ပါနဲ့။
Related article >>> ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဘရာကို ဆိုက်ဒ်မှန်မှန်ရွေးချယ်နည်းအဆင့် (၃) ဆင့်
(၄) Trends တွေနောက်လိုက်တာ
ခေတ်စားနေတဲ့ဖက်ရှင်တွေနောက် လိုက်တာကလည်း Stella တို့မိန်းကလေးတွေအားလုံးလိုလို လုပ်တတ်တဲ့အမှားတစ်ခုပါ။ လိုက်နာသင့်တဲ့ trends ရှိသလို၊ ကိုယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ trends ဆိုတာလည်း ရှိတယ်လေနော်။ ဖက်ရှင် trends တွေအကုန်လုံးနီးပါးက runway ပေါ်မှာဆို မိုက်နေပေမဲ့ နေ့စဉ်ဝတ်ဖို့အတွက် အဆင်မပြေတာတွေလည်း အများကြီးပါ။ ဒါကြောင့် သူများ trend တိုင်း လိုက် မ trend ဘဲ ကိုယ့်စတိုင်လ်နဲ့ကိုယ် ရပ်တည်ဖို့လိုပါတယ်။
(၅) Accessories တွေ များလွန်းတာ
အဝတ်အစားတိုင်းလိုလိုက accessories လေးပါမှ ကြည့်ကောင်းတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အလွန်အကျွံဆိုရင်လည်း ရယ်စရာဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ Accessories တွေနဲ့ တန်ဆာဆင်တော့မယ်ဆိုရင် မတရားပြောင်ပြောင်လက်လက် မျက်စိကျိန်းတဲ့ accessories တွေထက် မကြီးလွန်းမသေးလွန်းနဲ့ လူတွေကိုဖမ်းစားနိုင်မယ့် accessories မျိုးကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Stella ပြောချင်တာကတော့ “Be comfortable with your own body” ပါ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ချစ်ပါ။ အဓိကကျန်းမာနေဖို့ပဲလေ။ ဘယ်သူ့အတွက်မှ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ပြောင်းလဲပေးစရာမလိုတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းပါ ယောင်းရေ …
မမဝဝမို့ စမတျကလြို့ မရတော့ဘူး ဘယျသူပွောလဲ
မိနျးကလေးတှအေတှကျ ဖကျရှငျနဲ့ပတျသကျရငျ ရှေးခယျြစရာတှေ အငျမတနျမြားတယျဆိုတာ ယောငျးတို့လညျး အသိပါပဲ။ တဈနေ့၊ တဈနေ့ အပွငျထှကျတော့မယျဆို အဝတျအစားအတှကျ ခေါငျးစားရတာကလညျး အလုပျတဈလုပျလေ… အထူးသဖွငျ့ ဖကျရှငျကို စိတျဝငျစားကွတဲ့ မိနျးကလေးတှပေေါ့.. ဒီလို ဖကျရှငျကို ရှေးခယျြတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားပျေါမူတညျလို့ ဘယျလိုလေးဆို ကိုယျနဲ့လိုကျမလဲ စဉျးစားကွရတာ ပုံမှနျပါပဲ။ အဲဒီမှာတငျ အလှဲတခြို့ ပျေါလာတော့တာပဲ ယောငျးတို့ရေ… ဒါဆို ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ မိနျးကလေးတှေ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျညီတဲ့ အဝတျအစားရှေးတဲ့အခါမှာ ဘယျလို အမှားတှေ လုပျမိတတျလဲ ကွညျ့ကွညျ့ရအောငျ…
ခပျပွညျ့ပွညျ့မိနျးကလေးတှေ အမြားဆုံးလုပျတတျတဲ့အမှားကတော့ ကိုယျဝတာကို အင်ျကြီပှပှတှအေောကျမှာ ဖုံးထားရငျ သှယျလသြလိုဖွဈမယျထငျကွတာပဲ။ အင်ျကြီပှပှတှကေ ယောငျးကို ပိနျတဲ့အသှငျ မဖွဈစတေဲ့အပွငျ ပိုဝတဲ့အသှငျပွောငျးပေးနတေယျဆိုတာ သတိခပျြပါ။
Related article >>> လုပျငနျးခှငျဝငျနတေဲ့ အမြိုးသမီးတိုငျးမှာ ရှိကိုရှိသငျ့တဲ့ အင်ျကြီ (၅) မြိုး
(၂) အရောငျရငျ့တှပေဲ ရှေးဝတျတာ
အရောငျရငျ့တှကေ လူကိုပိနျသှယျတဲ့အသှငျပေးတာ မှနျပမေဲ့ အမွဲအရောငျရငျ့တှပေဲ ဝတျတော့မလို့လား ? အရောငျတောကျတောကျတှေ၊ အရောငျဖြော့တှကေို အပျေါတဈရောငျ၊ အောကျတဈရောငျ ဝတျတာက ခါးနဲ့တငျကို အခြိုးကကြ ခှဲထုတျပေးတဲ့အပွငျ လူတှရေဲ့အမွငျကိုလညျး လှညျ့စားပေးနိုငျပါတယျ။
(၃) ဆိုကျဒျအပျေါမှာ အာရုံစိုကျလှနျးတာ
ကိုယျက L size ဝတျနကေဆြိုပါစို့။ ရှော့ပငျးထှကျလို့ L size ထကျ M size က ကိုယျ့အတှကျ ပိုကြော့ရှငျးတဲ့အသှငျ ဖွဈစမေယျလို့ထငျရငျ M size ကိုပဲရှေးပါ။ ကောကျညှငျးထုတျဖွဈနမေလား၊ ဝိတျပွနျတကျလာရငျ မတျောတော့ဘဲနမေလား ဆိုတဲ့စိတျနဲ့ ဆိုဒျပျေါမူတညျပွီး မကနျ့သတျလိုကျပါနဲ့။
Related article >>> ကိုယျနဲ့အသငျ့တျောဆုံးဘရာကို ဆိုကျဒျမှနျမှနျရှေးခယျြနညျးအဆငျ့ (၃) ဆငျ့
(၄) Trends တှနေောကျလိုကျတာ
ခတျေစားနတေဲ့ဖကျရှငျတှနေောကျ လိုကျတာကလညျး Stella တို့မိနျးကလေးတှအေားလုံးလိုလို လုပျတတျတဲ့အမှားတဈခုပါ။ လိုကျနာသငျ့တဲ့ trends ရှိသလို၊ ကိုယျနဲ့မလိုကျတဲ့ trends ဆိုတာလညျး ရှိတယျလနေျော။ ဖကျရှငျ trends တှအေကုနျလုံးနီးပါးက runway ပျေါမှာဆို မိုကျနပေမေဲ့ နစေ့ဉျဝတျဖို့အတှကျ အဆငျမပွတောတှလေညျး အမြားကွီးပါ။ ဒါကွောငျ့ သူမြား trend တိုငျး လိုကျ မ trend ဘဲ ကိုယျ့စတိုငျလျနဲ့ကိုယျ ရပျတညျဖို့လိုပါတယျ။
(၅) Accessories တှေ မြားလှနျးတာ
အဝတျအစားတိုငျးလိုလိုက accessories လေးပါမှ ကွညျ့ကောငျးတာ အမှနျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အလှနျအကြှံဆိုရငျလညျး ရယျစရာဖွဈသှားတတျပါတယျ။ Accessories တှနေဲ့ တနျဆာဆငျတော့မယျဆိုရငျ မတရားပွောငျပွောငျလကျလကျ မကျြစိကြိနျးတဲ့ accessories တှထေကျ မကွီးလှနျးမသေးလှနျးနဲ့ လူတှကေိုဖမျးစားနိုငျမယျ့ accessories မြိုးကို ရှေးခယျြပေးပါ။
နောကျဆုံးအနနေဲ့ Stella ပွောခငျြတာကတော့ “Be comfortable with your own body” ပါ။ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကို ခဈြပါ။ အဓိကကနျြးမာနဖေို့ပဲလေ။ ဘယျသူ့အတှကျမှ ကိုယျ့ရဲ့ဖွဈတညျမှုကို ပွောငျးလဲပေးစရာမလိုတဲ့အတှကျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ ဘဝကို ဖွတျသနျးပါ ယောငျးရေ …
Tags: closet, Fashion, Plus-size, Style, tips, what to wear